ထီပေါက်သလို ရွှေတန်ချိန် ၃၀၀၀ ထွက်မယ့် ရွှေတွင်း တွေ့ရှိနေပီဖြစ်တဲ့ ရွှေနိုင်ငံ - Thu Ta Myay
ထီပေါက်သလို ရွှေတန်ချိန် ၃၀၀၀ ထွက်မယ့် ရွှေတွင်း တွေ့ရှိနေပီဖြစ်တဲ့ ရွှေနိုင်ငံ
တကယ် ရွှေနိုင်ငံ၂၂- ၂- ၂၀ ၂၀အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း uttar-pradesh ပြည်နယ် Sonbhadra ခရိုင်အတွင်းမှာ ရွှေတန်ချိန် ၃၀၀၀ ထွက်မယ့် ရွှေတွင်းကိုတွေ့ရှိနေပြီဖြစ်လို့ မကြာခင် ရွေတူးဖေါ်ခွင့် လိုင်စဉ် တင်ဒါခေါ်ယူမယ်လို့ ပြည်နယ် TV သတင်းမှာဖေါ်ပြသွားကြောင်း သိရပါတယ်။ သူဌေးထီပေါက်သလို ပါ ၊အန္ဒိယ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ ရွှေအထွက်ဆုံး (တနှစ်တန်ချိန် ၉၀၀) နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ 1.37 billion or 1,369 millions လူဦးရေ သန်းပေါင်း1,352,642,280. ၁၃၀၀ ကျော် နေထိုင်နေတဲ့ အန္ဒိယနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့် သန်း ကြွယ်သူဌေး ပေါင်း ၃၃၀၀၀၀ (၂၀၁၉) ရှိနေပြီး လာမယ့် ၂၀၂၇ နှစ်မှာဆိုရင် သန်းကြွယ်သူဌေးပေါင်း တသန်းကျော်ရှိလာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။SAW
Locals in Sonbhadra district of Uttar Pradesh woke up to see their town discussed on television channels as the news of massive gold reserve in the hills of Kaimur and Son Pahadi spread. The base of the news wasareport prepared by the Geological Survey of India (GSI) which said that more than 3300 tonnes of gold ore is buried in the region.Unicodeတကယျ ရှနေိုငျငံ၂၂- ၂- ၂၀ ၂၀အိန်ဒိယ နိုငျငံ မွောကျပိုငျး uttar-pradesh ပွညျနယျ Sonbhadra ခရိုငျအတှငျးမှာ ရှတေနျခြိနျ ၃၀၀၀ ထှကျမယျ့ ရှတှေငျးကိုတှရှေိ့နပွေီဖွဈလို့ မကွာခငျ ရှတေူးဖျေါခှငျ့ လိုငျစဉျ တငျဒါချေါယူမယျလို့ ပွညျနယျ TV သတငျးမှာဖျေါပွသှားကွောငျး သိရပါတယျ။သူဌေးထီပေါကျသလို ပါ ၊အန်ဒိယ နိုငျငံဟာ ကမ်ဘာမှာ ရှအေထှကျဆုံး (တနှဈတနျခြိနျ ၉၀၀) နိုငျငံဖွဈပါတယျ။1.37 billion or 1,369 millions လူဦးရေ သနျးပေါငျး1,352,642,280. ၁၃၀၀ ကြျော နထေိုငျနတေဲ့ အန်ဒိယနိုငျငံမှာ နိုငျငံတကာအဆငျ့ သနျး ကွှယျသူဌေး ပေါငျး ၃၃၀၀၀၀ (၂၀၁၉) ရှိနပွေီးလာမယျ့ ၂၀၂၇ နှဈမှာဆိုရငျ သနျးကွှယျသူဌေးပေါငျး တသနျးကြျောရှိလာမယျလို့ ဆိုပါတယျ။SAW
Locals in Sonbhadra district of Uttar Pradesh woke up to see their town discussed on television channels as the news of massive gold reserve in the hills of Kaimur and Son Pahadi spread. The base of the news wasareport prepared by the Geological Survey of India (GSI) which said that more than 3300 tonnes of gold ore is buried in the region.